Aqoonkaab sidee ayaad shaqadaada uga dhigi kartaa mid wax soo saar badan | Aqoonkaab
sidee ayaad shaqadaada uga dhigi kartaa mid wax soo saar badan
Jun 14, 2015Arrimaha bulshada
qofka kasta wuxu jecel yahay inuu noqdo mid xasiloon oo degan isla markaana shaqadiisa sidii la rabay u guta si uu noqdo qof la isku halayn karo ,laakiin dad ka qaar ayaa jaahil ka ah tilmaamaha ugu muhiimsan ee ka caawin karta inuu shaqaddiisa sida ugu fiican u guto.
sidaasi daraadeed maqaalkan ayaanu idiinku soo badhigeynaa tilmaamo iyo talooyin kaa dhigeysa qof ku guuleysan kara shaqadiisa .
1. Gooni u sooc jadwalka shaqadaada maalinle ah
in aad jadwalkaaga shaqada u qoondeyso waqtiyo gaar ah waa shayga ugu badan ee kaa caawinaya in ay shaqadaadu noqoto mid wax soo saar badan ,
marka hore xulo shaqooyinka muhiim ka ee ay tahay in maalin fuliso ka dib cayin waqtiga aad ku qabanayso ,nidaamkani haddaad raacdo waa hubaal inaad u fulinayso shaqooyinkaaga sidii ugu wanaagsanyd uguna dhakhsaha badan sidoo kale waxaad awood u yeelanaysaa inaad ogaato xadiga shaqo ee aad qaban karto iyo inta aanad qaban karin maalintii.
2. Liis u samee shaqooyinka ay tahay inaad qabato ,naftaadana abaal mari marka aad dhamayso.
qor oo liis geli shaqo kasta marka aad dhamayso ,habaynta noocani waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad shaqooyinka u heelanaato isla markaana aad si dhakhso ah u qabato ,markaad dhowr shaqo qabato jooji shaqada naftaadana sii waqti ay ku nasato kuna raaxeysato sidoo kale cab shaah ama koffee ama cabitaanada kale ee ay naftaadu door biddo waqti aad nasanayso waa inay ahaataa toban daqiiqo ilaa rubuc saac .
3. ka fogow dhammaan waxkasta oo ka mashquuliya shaqadaada.
markaad ka fogaato dhamaan waxyaabaha ka mashquulinaya shaqadaada waxa keliya ee aad diirada ku haynayso waa shaqadaada ,tusaale ahaan haddaad moobilkaaga ka hesho farriimo badan ama wacitaano badan waxa fiican inaad aad damiso moobilka si aanay shaqada kaaga mashquulin tana waxay kaa caawinaysaa inaad shaqadaada u dhamayso sidii la rabay iyo waqtigii kuu qoondaysnaa.
4. dooro waqtiga aad shaqada ugu badan qabanaysid maalin kasta
ugu dambayn waa inaad ogaataa waqtiga aad ugu firfircoon tahay suurto galna ay tahay inaad qaban karto shaqooyin badan .dad badan ayaa aaminsan in subaxa hore illaa duhurka ay tahay inay qabtaan shaqada u badan .laakiin haddaad dareemeyso waqtiyo kale oo aad firfircoontahay sida galabti waad qaban karta shaqadaada inta u badan.
hadaba ogow inay shaqadaadu noqoto mid wax soo saar badan kuma xidhna dadaal iyo howl badan balse waxay ku xidhantahay nidaam iyo tartiib aad siiso shaqadaada kuwa ugu muhiimsan waa inaad ugu hor qabataa . sidaasi daraadeed waa inaad bedeshaa qaabka aad u shaqeyso hadda ka dib.
xuquuqda :bahda aqoonkaab
Previous PostMobilada aduunka ugu xiisaha badan sanadkan 2015 iyo falanqeyntooda Next PostYahoo oo xidhay adeegyo badan ay leedahay